China ဘရိတ် Cylinder JAF0805 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ JAF
အဘိတ်ဘရိတ်၏ပိုမိုကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ဘရိတ်ဆလင်ဒါ၏အင်အားကိုဘရိတ်အုပ်များသို့တိုက်ရိုက်ပို့သည်။ ဘရိတ်နိုင်စွမ်းသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးစနစ်တစ်ခုလုံး၏အလေးချိန်သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ စျေးကွက်၏အချက်အလက်များအရရှေ့နှင့်နောက်ဘီးများအားလုံးပါ ၀ င်သည့် 6x4 လယ်ထွန်စက်သည်သပ်သောဘရိတ်ဖြင့်အစားထိုးကာအလေးချိန် ၅၅ ကီလိုဂရမ်လျှော့ချနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် - ဤထုတ်ကုန်သည်လက်ရှိစျေးကွက်ရှိမော်ဒယ်များအတွက်သင့်တော်ပြီးစျေးကွက်များ၌အလွန်လူကြိုက်များသည်။
၁။ ပေါ့ပါးသည့်အရာ - သမားရိုးကျလေဘရိတ်ဘရိတ်ဘရိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရိုးရှင်းသောဘရိတ်စနစ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောလက်တံ၊ ဘောင်းဘီဘရိတ်နှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ပေါက်ဘရိတ်နှင့်အစားထိုးထားသောအရံဘရိတ်စနစ်ရှိအရံအဖွဲ့သည်နှိုင်းယှဉ်။ ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ ရိုးရာဘရိတ်ပြားထက်။ စာရင်းအင်းများအရ၊ ဘရိတ်ဆလင်ဒါသည်အလေးချိန်အား ၁၀ မှ ၁၅ ကီလိုဂရမ်အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
၂။ လျင်မြန်သောဘရိတ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ကြီးမားသောဘရိတ် torque: သပ်ဘရိတ်သည်ပုံမှန် camshaft ဘရိတ်ထက်ပိုမိုရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ brge br br br cyl transmission w w efficiency w efficiency w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ထို့ကြောင့်ဘရိတ်လုပ်သည့်အခါ, တိတ်ဆိတ်ဘရိတ်မြန်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ကြီးမားသောဘရိတ် torque ရှိပါတယ်။
ပုံစံများ - နစ်ဆင်
အချင်း: 55,56 မီလီမီတာ
oe အဘယ်သူမျှမ။ : 41100-90211 / 41100-30211 / MC895556
JAF အမှတ် .: JAF0805 #
အသားတင်အလေးချိန် - ၃.၆၂၅kg စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၃.၈၇၅kg၊
ထုပ်ပိုးခြင်းနည်းလမ်း - ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်အတွင်းသေတ္တာတစ်ခု၊ သေတ္တာတစ်ခုအတွက်အတွင်းသေတ္တာ ၈ ခု
ကြားနေထုပ်ပိုးမှု - ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီကိုပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံး၊ အတွင်းသေတ္တာနှင့်အပြင်ဘက်သေတ္တာများပါရှိသည်
ပြင်ပသေတ္တာအရွယ်အစား - ၄၀ စင်တီမီတာ * ၃၃ စင်တီမီတာ * ၂၃ စင်တီမီတာ၊ အတွင်းသေတ္တာအရွယ်အစား - ၁၉ စင်တီမီတာ * ၁၅.၅ စင်တီမီတာ * ၁၁.၃ စင်တီမီတာ
၁။ ကွဲရန်လက်စွပ် (၀ င်ရိုးအတွက်) ၂။ လိပ်ပြာ gasket (၃) Tower spring 4. Push rod 5. သေးငယ်တဲ့ဖုန်အဖုံး ၆။ နွေ ဦး ထိုင်ခုံ ၇ ။ အပေါက်အတွက် (၈) Bracket ၉ ။ Roller ၁၀။ Card ၁၁။ Spring 12 13. ထိန်းထားသည့်လက်စွပ် 14.Torsion spring 15.Dust အဖုံး 16. Butterfly Spring 17. Piston လက် 18.Piston 19. Slider 20.Shell 21. Bolt
၁ - ဖိနပ်ရိုးတံ ၂ - ပြန်လာသည့်နွေ ဦး ၃ - ကွင်းချဲ့စက် ၄ - ဖိနပ်တပ်ဆင်မှု ၅ - ဘရိတ်ကျောကပ် ၆ - ဖုန်အဖုံး ၇ - ဘရိတ်လေကြောင်းအခန်း
ညွှန်ကြားချက်များ - သပ်သောဘရိတ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမိုင်အကွာအဝေးမှာ ၁၀၀၀၀၀ ကီလိုမီတာဖြစ်သည်။ အဓိကစစ်ဆေးမှုမှာဘရိတ်ရှိဆီချောဆီကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပြီးယင်း၏တံဆိပ်များကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည်ကိုတွေ့ရှိပါကအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ပြန်လည်သန့်စင်ရန်လိုအပ်သည် (မှတ်ချက် - ဖုန်မှုန့်အဖုံးသည်ဒီဇယ်၊ ရေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီစသဖြင့်သန့်ရှင်းသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်)၊ အမဲဆီနှင့်ပြည့်စုံအတွင်းပိုင်း။ အကယ်၍ ဖုန်အဖုံးများပျက်စီးသွားပါကဖုန်အဖုံးကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ အထွေထွေလီသီယမ်အခြေစိုက်စခန်းအမဲဆီ (cb5671) ကိုချောဆီအရည်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆိုပျက်စီးလျှင်၎င်းတို့ကိုအစားထိုးရမည်။
ရှေ့သို့ ဘရိတ်ဘီးဆလင်ဒါ JAF8313
နောက်တစ်ခု: ဘရိတ်ဘီးဆလင်ဒါ JAF0699
Disc Brake Master ဆလင်ဒါ
လိပ်စာ: နည်းပညာစက်မှုဇုန်၊ ကန်နန်၊ ယူဟွမ်၊